Voina teny an-dalana :: Lehilahy may niaraka tamin’ny môtô • AoRaha
Namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana, tany amin’ny lalam-pirenena voalohany, tany Andranomadio, any amin’ny valo kilaometatra tsy hidirana ny tanànan’i Tsiroanomandidy, ny lehilahy iray, manodidina ny 40 taona, afak’omaly tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro. Nirehitra ny môtô notaingenany. Kilan’ ny afo tamin’izany ny vatany. Potika tanteraka ny kodiarandroa.
Avy any Ankadinondry Sakay no nikasa hihazo an’i Tsiroanomandidy ity lehilahy ity nandeha môtô “scooter”. Tsy nisy nahita ny fomba nitrangan’ny voina nahazo azy. Mpitondra môtô hafa nandalo teo amin’ny toerana nisian’ny loza no nahita ny kodiarandroa nirehitra sy ilay lehilahy efa main’ny afo. Nantsoina haingana ny mponina teo amin’ ny manodidina. Tsy avotra ny ain’ilay niharam-boina. Ny fitantaran’ity mpandeha môtô faharoa no naminavinana ny zava-niseho.
“Nisongona môtô iray nanao taingin-droa io môtô tra-doza io, teny an-dalana. Heverina ho nianjera izy teo amin’ny lalana misy fiolahana. Tsy fantatra mazava ny antony nampirehitra ny môtô. Ilay lehilahy kosa mety ho tsy nahatsiaro tena ka izay no tsy nahafahany niala ny afo. Tsy voafaritra ihany koa na ny fianjerana no nahafaty azy na ny fahamaizany”, hoy ny mpitandro ny filaminana nanao ny fizahana tany an-toerana.
Fibedesana nitera-doza Reny nidaroka nahafaty ny zanany vavikely
Lozam-pifamoivoizana Mpitondra môtô maty tsy tra-drano teny Ivato
Fanafihana tany Toamasina Karohina ny naman’ireo efa-dahy matin’ny polisy
Vono olona niniana natao Nogadraina ny rahalahy sy zaodahin’ny pasitera
Amboanjobe :: Talena minisitera notafihin’ ny jiolahy